Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): Benazir Bhutto (ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘနာဇီယာဘူတို)
Benazir Bhutto (ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘနာဇီယာဘူတို)
ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စက်ဘနာဇီယာ ဘူတို၏ ဇာတာကို မိုးတား နည်းဖြင့် သုံးသပ်ချက်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြား၊ အောင်မြင်ကြသူ အများအပြား၏ မွေးနေ.၊ မွေးချိန်ကို ၄င်းတို.၏ ကိုယ်ရေး အထုပ္ပတ္တိ ပေါ်မူတည်၍ တွက်ချက် ထားကြသော ဇာတာတို.ကို အင်တာနက် စာမျက်နှာတို.တွင် များစွာ မြင်ကြရပါလိမ့်မည်။ အချို.ဆိုလျှင်- မွေးချိန်မပါပဲလျှက်- တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်တည်ရာ တစ်ချက် တည်းကို မူတည်၍ ၄င်းတို.၏ တွေ.ရှိချက် အမျိုးမျိုးကို ရေးသားကြပါသည်။ ထိုအထဲမှ မွေးနေ.၊ မွေးချိန် အများစုသည် အမှန်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ- အမေရိကန် သမ္မတ ဘီလ် ကလင်တန် ဆိုလျှင်- သူ၏ အထုပ္ပတ္တိ မှ မွေးချိန်ကိုသာ မူတည်၍ တွက်ချက်ပါက- အဖြေ အမှားများသာ ထွက်လာမည် ဖြစ်ပြီး၊ သူ၏ မိခင်ဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင် အနောက်တိုင်း နက္ခတ္တပညာရှင် တစ်ဦးကို ပြောပြ ခဲ့သော အချိန်ကို မူတည်၍ တွက်မှသာ အမှန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူပင်- ဝေလ မင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ သည် ၄င်း၏ မူလ မွေးချိန်ကို လျှို.၀ှက် လိုက်ပြီးနောက်- ဘာကင်ဟန် နန်းတော်တို. ရောက်ရှိ ပြီးမှ တရားဝင် ထုတ်ဖေါ် ကြေညာ သော မွေးချိန်သည် လည်း အမှားပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို.၏ မွေးချိန် အမှန်နှင့် အမှား ယှဉ်တွဲ ဆက်စပ် ရှင်းလင်း ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ နောက်ပိုင်း အခန်း များတွင် ရေးသား ပေးပါမည်။
ထိုနည်းတူပင် မစ္စက် ဘူတို၏ မွေးနေ.ကို အခြားသော စာစောင်များ- အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် - ဇွန်လ -၂၁-ရက်၊ ၁၉၅၃-ခု၊ ညနေ ၇း၅၉ ခုဖေါ်ပြ ထားကြသည်။ သို.သော် ထိုအချိန် သည် မှားယွင်း နေပါသည်။ ယခု MOTAA စနစ်ဖြင့် တွက်ချက်ထားသော မွေးနေ.နှင့် မွေးချိန် သည် ဇွန်လ -၂၃-ရက်၊ ၁၉၅၃-ခု၊ ညနေ ၄း၃၀ ဖြစ်ပါသည်။ ဤမွေးနေ. နှင့် မွေးချိန် အမှန်သည် ၁၉၈၄-ခုနှစ်က - အိန္ဒိယ တွင် ထင်ရှား သော ဝေဒ ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆရာကြီး ကေအင်န် ရောင် ထံတွင် ဇာတာရှင်ကိုယ်တိုင် ပြောကြား ခဲ့သော အချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန် အမှန် ဖြစ်ကြောင်းကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော တွက်ချက် မှုများက သက်သေ ခံနေပါလိမ့်မည်။ (အထူးမှတ်ချက်- MOTAA ပညာရှင် တစ်ဦး အနေဖြင့် မိမိထံတွင် လာရောက် စစ်ဆေးသော ဇာတာရှင် တစ်ဦး၏ အခွင့်ပြုခြင်း မရှိပဲ- ထိုဇာတာ ကို ပြင်ပ သို. မပေါက်ကြား စေရပါ။ ယခု -ဆောင်းပါး များတွင် ရေးသား ဖေါ်ပြ ထားသော ဇာတာများသည် ဇာတာရှင် များ ကိုယ်တိုင် မှ သက်ဆိုင်ရာ- ဆရာတို.ထံတွင် အခွင့်ပြု ထားသော ဇာတာများ၊ ဇာတာရှင် များကိုယ်တိုင် Astro Data bank ဟု ခေါ်သော နိုင်ငံတကာ ဝေဒ ပညာရှင်များ အတွက် အချက်အလက် စုဆောင်းသော ဌာန တွင် ခွင့်ပြု ပေးထားသော ဇာတာများသာ ဖြစ်ပါသည်။)
(ဤဇာတာအား လေ့လာရာတွင် ဂြိုဟ် တို.၏ သဘာဝများ၊ အင်အား လွှမ်းမိုးမှုများကို နားလည်ရန် အခက်အခဲ ရှိပါက- ”မိုးတား အခြေခံ” တွင် လေ့လာပါ။)
ဇာတာရှင်၏ ဘ၀ဖြစ်စဉ် အကျဉ်းချုပ်။
- ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ -၂၃-ရက်တွင် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ကရာချိမြို.တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မောင်နှမများ တွင် အကြီးဆုံးသမီး ဖြစ်သည်။
- ၁၉၇၆-ခုနှစ်- ကလေးဘ၀ ကို ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတွင်ပင် ကုန်လွန် စေခဲ့၍၊ အဆင့်မြင့် ပညာများကို ကမ္ဘာတွင် အဆင့်အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သော ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်၊ ရက်ကလစ် ကောလိပ်တွင် ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ၄င်းမှ ပြီးဆုံးသော အခါ အင်္ဂလန် နိုင်ငံ အောက်စ်ဖို.ဒ် တက္ကသိုလ် တွင် ဒုတိယ ဘွဲ.ကို ထပ်မံရယူ ခဲ့သည်။
- ၁၉၇၇-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅-ရက်တွင်၊ လက်ရှိ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ၏ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ ဖခင် ဇူလ်ဖီကာ အလီဘူတို အား ပါကစ္စတန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဇီယာ အူဟတ်မှ အာဏာ သိမ်းလိုက်သည်။
- ၁၉၇၇-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင်၊ ၄င်း၏ ဖခင် အား လူသတ်မှုဖြင့် စွဲဆို ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုလ နောက်ပိုင်းတွင် ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ခဲ့သည်။
- ၁၉၇၉-ဧပြီလ ၄-ရက်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူအား၊ နိုင်ငံရေး ပြိုင်ဘက် ဖြစ်သူအား သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် သေဒဏ် စီရင်ခဲ့သည်။
- ၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ- ၁၀-ရက်တွင် ဇာတာရှင်အား ဆေးဝါးကုသရန် အတွက် - ပါကစ္စတန် နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခွင့် ပေးခဲ့သည်။ ထိုသို.ထွက်ခွာခွင့် မပေးခင်က ဇာတာရှင်အား ၃-နှစ်ကြား ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်း ထားခဲ့သေးသည်။ ၄င်းအနေဖြင့် လန်ဒန်တွင် တစ်ဖြေးဖြေး အခြေကျ ခဲ့သည်။
- ၁၉၈၅-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈-ရက်တွင် မစ္စက်ဘူတို၏ မောင်တစ်ဦး ဖြစ်သူ ရှာန၀တ် ဘူတို အား ပြင်သစ်ပြည်ရှိ သူနေထိုင်ရာ အခန်းတွင် မသင်္ကာ စရာ ဦးခေါင်း ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံး နေသည်ကို တွေ.ခဲ့ရသည်။
- ၁၉၈၆-ခု၊ ဧပြီလ ၁၀-ရက်တွင်၊ ဖခင်တည်ထောင်ခဲ့သော ပါကစ္စတန် ပြည်သူ.ပါတီကို ဦးဆောင်ရန် အတွက် အမိ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသို. ပြန်လာခဲ့သည်။
- ၁၉၈၇-ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈-ရက်တွင် မိခင်ရွေးချယ်ပေးသော စီးပွားရေးသမားဖြစ်သူ အဆစ်ဖ် အလီ ဇာဒါရီကို လက်ထပ်ခဲ့သည်။
- ၁၉၈၈-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁-ရက်၊ အသက်အားဖြင့် ၃၅-နှစ်တွင်၊ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပြီးနောက် မူဆလင်နိုင်ငံ ဖြစ်သော ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
- ၁၉၉၀-ခုနှစ်တွင် အကျင့်ပျက်မှု၊ လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်စေမှုတို.ဖြင့် ဇာတာရှင်၏ အစိုးရအဖွဲ.ကို ဖြုတ်ချခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
- ၁၉၉၃-ခုနှစ်တွင် အကျင့်ပျက်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရေး ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် ထပ်မံ ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
- ၁၉၉၆-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀-ရက်တွင် မစ္စက်ဘူတို၏ နောက်ထပ် မောင်တစ်ဦး ဖြစ်သူ မူတာဇာ ဘူတိုသည် ရဲတပ်ဖွဲ.၀င် များနှင့် ပြဿနာ ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းအပါအ၀င် ထောက်ခံသူ ၆-ဦး တို.အား ပစ်သတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
- ၁၉၉၆-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅-ရက်တွင် ဆွေမျိုးကောင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ တရားဥပဒေ စံနစ်ကို မထီမဲ့မြင် ပြုလုပ်ခြင်း စသော စွပ်ဆွဲချက် များဖြင့် ၄င်း၏ အစိုးရ အဖွဲ.အား ဖြုတ်ချခြင်း ခံခဲ့ရပြန်သည်။
- ၁၉၉၉-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၄-ရက်တွင်၊ ဇာတာရှင် တက်ရောက်ခြင်း မရှိသော တရားရုံးတွင်၊ ဇာတာရှင်အား အပြစ်ရှိသည် ဟု ရုံးတော်မှ သတ်မှတ် ပြီးနောက်- မိမိ သဘောနှင့် ပြည်ပြေး ဘ၀သို.ရောက်ခဲ့သည်။
- ၂၀၀၇-ဇန်န၀ါရီလ ၂၇-ရက်တွင်၊ အမေရိကန် သမ္မတ ဂျော့ ဒဗလျူ ဘုရ်ှနှင့် တွေ.ဆုံ စကားပြောရန် အတွက် အမေရိကန် အစိုးရမှ ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
- ၂၀၀၇-ဇူလိုင်လ ၂၇-ရက်တွင်၊ အဘူဒါဗီတွင် ပါကစ္စတန် သမ္မတ မူရှာရဗ် နှင့် တွေ.ဆုံခဲ့သည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၅-ရက်တွင် ပါကစ္စတန် သမ္မတ မူရှာရဗ်မှ - ဇာတာရှင် အစွပ်စွဲခံထားရသော လာဘ်စားသော ပြဿနာ များမှ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ပေး၍၊ ၄င်းအား အမိနိုင်ငံ ပြန်လာနိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၈-ရက်တွင် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ကရာချိမြို.သို. ပြန်လာရာတွင်၊ လူအုပ်တွင်း အသေခံ ဗုံးခွဲ လုပ်ကြံမှုကြောင့် လူပေါင်း ၁၃၆-ယောက် သေဆုံးခဲ့ရသည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၂-ရက်တွင် အကြမ်းဘက် အဖွဲ.အစည်းများ၏ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇-ရက်တွင်၊ ၄င်းအား ထောက်ခံသူ ပြည်သူ လူထုကြီး၏ “မစ္စက် ဘူတို သက်တော် ရာကျော် ရှည်ပါစေ ” ဟူသော ကြွေးကြော်သံတို.ဖြင့် ဆုံတွေ.ခဲ့ရသည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃-ရက်တွင် ပါကစ္စတန် သမ္မတ မူရှာရဗ် မှ အရေးပေါ် အခြေအနေကို ကြေညာ ခဲ့သည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉-ရက်တွင်၊ နေအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ် ချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃-ရက်တွင် နေအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ် ချမှတ်ခြင်း ထပ်မံ ခံခဲ့ရသည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈-ရက်တွင် ပါတီ နယ်မြေခံရုံးသို. သေနတ်သမား များက တိုက်ခိုက် မှုကြောင့်၊ ၄င်းအား ထောက်ခံသူ ၃-ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀-ရက်တွင် အခြား အတိုက်အခံ ဖြစ်သော မစ္စတာ နာဝတ် ရှာရစ် အနေဖြင့် မစ္စက်ဘူတို အား ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရန် စည်းရုံး၍ မရသောကြောင့် -၄င်း လည်း ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅-ရက်တွင် ပါကစ္စတန် သမ္မတ မူရှာရဗ် မှ အရေးပေါ် အခြေအနေကို ရုတ်သိမ်း ပေးလိုက်သည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅-ရက်တွင် မစ္စက် ဘူတို မှ -ပါကစ္စတန် သမ္မတ မူရှာရဗ် အနေဖြင့် အစ္စလာမ် အစွမ်းရောက် အကြမ်းဘက် များအား ရပ်တန်. ပေးနိုင်စွမ်း မရှိကြောင့် စွပ်စွဲလိုက်သည်။
- ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇-ရက်တွင် မစ္စက် ဘူတို သည် ရာဝယ် ပင်ဒီ တွင် သေနတ်သမား၏ အနီးကပ် ပစ်သတ်မှုကို ခံရပြီးနောက် - နောက်ဆက်တွဲ အသေခံ ဗုံးခွဲလုပ်ကြံခြင်းကို ခံရ၍ ပါကစ္စတန် စံတော်ချိန် ၁၈-၁၆ မိနစ် (ဂရင်းနစ် စံတော်ချိန် ၁၃း၁၆) တွင် ကွယ်လွန် အနိစ္စ ရောက်ခဲ့ ရသည်။
အထက်တွင် ဖေါ်ပြပါ MOTAA ကံကြမ္မာ ဂရပ်ဖ် နှင့် မစ္စက်ဘူတို၏ ဘ၀ ဖြစ်စဉ်ကို ယှဉ်တွဲ၍ လေ့လာ လိုက် ပါက- သူ. ဘ၀ တွင် ကြုံတွေ.ခဲ့ရသော လောကဓံ တရား၏ ရိုက်ပုတ်မှု ဒါဏ်ကို အချိန်ကာလ ပိုင်း အလိုက် သရုပ်မြင် ထင်ရှားနေပါသည်။ ဤပညာသည်-လွန်စွာ တိကျသော အဆင့်မြင့်လှသည့် ရှေးပညာရှိ တို.၏ ပညာ ဖြစ်ပါသည်။ အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ သည့် အတိုင်း MOTAA အနေဖြင့်- တစ်ချိန်က မြန်မာ နိုင်ငံ၊ မြန်မာ လူမျိုးတို.တွင် ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ဘူးသော ရှေးဟောင်း သိပ္ပံ ပညာရပ် ကို ခေတ်နှင့် လျော်ညီစွာ စစ်ဆေး၍ မြန်မာတို. ပြန်လည် တန်ဘိုးထား၊ ပိုင်ဆိုင် လာ နိုင်စေရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။
မစ္စက်ဘူတို၏ မူလ ဘွားဇာတာ အား အသေးစိတ် လေ့လာခြင်း။
ဤအခန်းသည် ဝေဒပညာကို လေ့လာလိုက်စား နေကြသူများ၊ ဗေဒင် ပညာရှင် အဖြစ်ဖြင့် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ပြုနေကြသူများ အတွက် အဓိက ထား၍ ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် - နက္ခတ္တ ဝေဒ ပညာ အခြေခံ မရှိသူများ အနေဖြင့် နားလည် ရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ ထို.ကြောင့် စတင် လေ့လာ နေသူများ အနေဖြင့် MOTAA အခြေခံ ကို ဦးစွာ လေ့လာပြီးမှ သာလျှင် ပို၍ အကျိုးရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ (MOTAA အခမဲ့ သင်ခန်းစာ များကို မူ သင်တန်းတက်လိုသူများ အတွက်- အခြေခံ အဆင့်မှ- အဆင့်မြင့် ဆရာဖြစ် အဆင့် အထိ နောင်တွင် ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။)
ဤအချက်များကို ဆွေးနွေးရာတွင်- ဂြိုဟ်တစ်ခုချင်းစီ နှင့် ၄င်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးချက်များကို စာရေးသူမှ အသေးစိတ် ဆွေးနွေး ရှင်းလင်း ထားခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ- စာဖတ်သူများ အနေဖြင့် ဇာတာ တစ်စောင်ကို စစ်ဆေးရာ၌ အချက်အလက် တစ်ခုကောင်း၊ နှစ်ခုကောင်းကို မြင်တွေ.ရုံမျှ နှင့် - အလွယ်တကူ အဖြေ မထုတ် မိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထင်ရှားသော ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်း တို.သည် - ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖေါ်ပြ နေတတ်ခြင်း၊ ရန်ဖန် ရန်ခါ ဆိုသလို- အခြား သော ဆန်.ကျင်ဘက် အကြောင်းများ ပေါ်လာတတ်ခြင်း တို.ကို ထင်ရှားစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ စာရေးသူ အနေဖြင့်- ဤကဲ့သို. အသေးစိတ် အချက် များ မရှင်းပြပဲ- အလွယ်တကူ အဖြေထုတ်ပြလိုက်ပါ- နက္ခတ္တ ပညာ အခြေခံ မရှိသူတို. အတွက်- သိပ်ပြီး မျက်စိလည်၊ ရှုပ်ထွေး သွားမည် မဟုတ်သော်လည်း၊ စစ်မှန်သော ပညာရပ်ကို ကိုယ်တွေ.သည့် အပိုင်းတစ်ခု တည်း သာ ရွေးချယ် ရေးလိုက် သလိုမျိုး ဖြစ်သွားမည် စိုး၍ လည်းကောင်း၊ စစ်မှန်သော ပညာရပ်ကို လေးလေး နက်နက် သဘောထားပြီး လေ့လာ နေသူများ- အနေဖြင့် အကျိုး ရရှိ စေရန် ရည်ရွယ်၍ လည်းကောင်း စေတနာမွန် ဖြင့် ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် အား MOTAA နည်းဖြင့် အသေးစိတ်ဖြင့် လေ့လာခြင်း။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် အနေဖြင့် ၈-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည်ခြင်းအားဖြင့် လျှို.၀ှက် နက်နဲသော ကိစ္စရပ် များ၊ ဂမ္ဘီရ ပညာရပ်များ တွင် စိတ်ဝင်စားတတ်သည်။ ဤ အချက်ကို သက်သေပြနေသော အချက်မှာ - မူဆလင် ဘာသာဝင် ပင် ဖြစ်သော်လည်း- အိန္ဒိယ မှ ဗေဒင်ပညာရှင် ကြီးကို လျှို.၀ှက် တွေ.ဆုံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို.သော်လည်း တစ်ဆက်တည်းမှာပင် - အောင်မြင်မှု၊ ဘ၀ တိုးတက်မှုကို ဖေါ်ဆောင်သော တနင်္ဂနွေသည်- မကောင်းသော ဒုဌာန ဘာဝ ဖြစ်သည့် ၈-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည်နေခြင်း က- ဇာတာရှင် အနေဖြင့် ဘ၀ အောင်မြင်မှု တွင် ဆုံးရှုံး နစ်နာမှုများ ရှိတတ် သည်ကို ဖေါ်ပြနေသည်။ တစ်ဖန် တနင်္ဂနွေ သည် ဘခင် ဖြစ်သူကို ရည်ညွှန်းသော ဂြိုဟ်ဖြစ်နေခြင်း၊ ၄င်းသည် မရဏ ဘာဝ ခေါ်သော ၈-တန်.ဘာဝ တွင် ရပ်တည်နေခြင်း၊ ရန်သူကို ဖေါ်ဆောင် သော ၆-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် အင်္ဂါ (တနည်းအားဖြင့် ရုတ်တစ်ရက်- ပေါ်ပေါက်တတ် သော အန္တရာယ်မျိုးကို ဖြစ်စေသည့် သွေးသံ ရဲရဲကို သရုပ်ဖေါ်သည့် အင်္ဂါနှင့် အတူ ၈-တန်.တွင် ပူးနေကာ- အင်္ဂါ၏ လွှမ်းမိုးမှု ၆၆% ကို ရရှိထားခြင်း) တို.သည် - ဇာတာရှင်၏ ဘခင် ဖြစ်သူ အနေဖြင့် ရန်သူ၏ လုပ်ကြံမှုကြောင့် - အသေဆိုးဖြင့် သေရခြင်းကို ဖေါ်ဆောင်နေလေ တော့သည်။ ဘခင်နှင့် ပါတ်သက်၍ တစ်ဆက် တည်း လေ့လာ လိုက်ပါက- ဘခင်ကို ကိုယ်စားပြုသော ဘာဝ ဖြစ်သည့် ၉-တန်.ဘာဝ ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်သည် ၁-တန်.ဘာဝ တွင် လဂ်နှင့် အတူ တည်နေခြင်း၊ ၉-တန်.ဘာဝအား Functional Benefic ခေါ် ကာရက သောမဂြိုဟ် ဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် (တစ်နည်းအားဖြင့် ၁၁-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်-ဗုဒ္ဓဟူး) နှင့် ၄-တန်.ဘာဝ၏ မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ရှင် စနေတို.မှ လွှမ်းမိုးမှု အင်အား ၈၇%၊ ၇၆% တို.ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း၊ (၁၁-တန်.ဘာဝ နှင့် ၄-တန်.ဘာဝသည် လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုကို ရည်ညွှန်းသည်။)တို.ကြောင့် ဇာတာရှင်၏ ဘခင်သည် အထွတ်အထိပ် ရာထူး ဌာနန္တရ ကြီးမား သူ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြနေသည်။
တစ်ဆက်တည်း ဆက်စပ်၍ လေ့လာလိုက်မည် ဆိုပါက-ဇာတာရှင်၏ စရိုက်ကို ဖေါ်ပြသော တနင်္ဂနွေသည်- လေဓါတ်ကို အစိုးရသော၊ မေထုန်ရာသီ၊ တနည်းအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ပိုင်သော ရာသီတွင် ရပ်တည် နေခြင်းကြောင့်- ဤဇာတာ ပိုင်ရှင်တို.သည် ပါတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကို လိုက်၍ စရိုက် ပြောင်းတတ် သူမျိုးဖြစ်သည်။ အဆက်မပြတ် ဆိုသလို - လေ့လာ စူးစမ်းတတ်သူများ ဖြစ်သည်။ တနည်း အားဖြင့် မိမိ၏ အောင်မြင်မှု အတွက် အခြေအနေကို ကြည့်၍ သင့်တော်သလို လုပ်တတ်သော သူမျိုး ဖြစ်သည်။
တစ်နည်း အားဖြင့်လည်း -တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်သည် ၁၀-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်ကာ-၄င်းသည် ၈-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဘ၀ တွင် အလုပ် လမ်းကြောင်း တစ်ဆစ်ချိုး အပြောင်းအလဲကို ကြုံတွေ.ရလိမ့်မည်။ သာမာန် လူဖြစ်ပါက- အလုပ်ပြုတ်ခြင်း၊ မိမိ၏ အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျ စေခြင်း တို.ကို ဖြစ် စေသည်။ (ဇာတာရှင် အနေဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် ၂-ကြိမ် အရွေးခံရသော်လည်း-၂-ကြိမ်စလုံး ဖြုတ်ချ ခံရခြင်းက ထိုအချက်ကို ညွှန်းဆိုနေပါသည်။)
တနင်္လာဂြိုဟ် (စန်း) အား MOTAA နည်းဖြင့် အသေးစိတ်ဖြင့် လေ့လာခြင်း။
တနင်္လာသည် ၁-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည်ခြင်းကြောင့် စိတ်ခံစားလွယ်သည်။ စိတ်ထိခိုက်လွယ်သည်။ စိတ်ဆတ်သည်။ ကိစ္စရပ်များကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် စိတ်တွင်းမှ အလိုအလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော Instinct အတိုင်းဆုံးဖြတ်လေ့ရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ၉-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်သည် ဖြစ်သော တနင်္လာသည် ၁-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင် အတွက် ဘခင် ဖြစ်သူသည် အလွန်အရေးကြီးသော အနေအထား တွင် ရှိနေသေည်လည်း- ပင်ကိုယ် သဘာဝ အားဖြင့်လည်း ဇာတာရှင်သည် မိမိကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစဖြင့် ကြီးပွားမည်သူ ဖြစ်သည် ကို ဖော်ပြနေသည်။ ဇာတာရှင်၏ ခင်မင်လိုဘွယ်ကောင်း သော အပြုအမူ အနေအထိုင် တို.ကြောင့် အများက အသိအမှတ်ပြုရသော သူဖြစ်သည်။ အထက် လူကြီးများက တုံ.ဆိုင်းခြင်း မရှိပဲ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းကို ရရှိမည့် ဇာတာမျိုး ဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင် အနေဖြင့် မြင့်မားသော ဘ၀ အခြေအနေကို ရောက်ရှိလိမ့်မည်။
တနင်္လာဂြိုဟ်အား လွှမ်းမိုးထားသော ဂြိုဟ်များကို လေ့လာကြမည် ဆိုပါက-တနင်္လာဂြိုဟ်၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ဖြစ်ရာ-၉-တန်.ဘာဝအား ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် စနေမှ ကောင်းသော အင်အားတို.ဖြင့် ထင်ရှားလွှမ်းထားသည်ကို တွေ.မြင် ရသည်။ ဤနေရာတွင်- စနေသည် ဂြိုဟ်ဆိုး မဟုတ် သည်ကို သတိပြုကြ ရန် လိုပါသည်။ လာဘ ဘာဝခေါ်သော ၁၁-ဘာဝ ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဗုဒ္ဓဟူးသည် တနင်္လဂြိုဟ်၏ မူရင်းအစစ် အမှန် ဖြစ်သော မူလတြိဂေါဏ အိမ်ဖြစ်သည့် ၉-တန်.ဘာဝ (ကရကဋ် ရာသီ) ၏ ဗဟိုချက်မှ မကွာဝေးသော အနေအထားတွင် ရပ်တည်လျှက် ထိုဗဟိုချက်အား ၈၇% ဖြင့်လွှမ်းမိုး ထားသည်။ အထက်ပါ အချက်ကို စုပေါင်း အဓိပ္ပါယ် ဖေါ်လိုက်ပါက-၁၁-တန်.ဘာဝသည် - လာဘ်လာဘ၊ လူနေမှု အဆင့် အတန်း မြင့်မားမှု ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်း၏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဟူးသည် ဇာတာရှင်၏ ဘခင်ကို ဖေါ်ဆောင်သော ၉-တန်.ဘာဝ အိမ်ရှင်၊ တစ်နည်း အားဖြင့် လည်း ဇာတာရှင်၏ စိတ်ဓါတ် နှင့် ပြည်သူ လူထု၏ ချစ်ခင် မှုကို ဖေါ်ပြသော တနင်္လာ ဂြိုဟ် ပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးထားသဖြင့်- ဇာတာရှင် ၏ ဘခင်သည် လည်းကောင်း၊ ဇာတာရှင်၏ စိတ်ဓါတ် သည် လည်းကောင်း၊ အဆင့်မြင့်သူ ဖြစ်၍၊ ပြည်သူ လူထု၏ ထောက်ခံမှု သည် ဇာတာရှင်၏ အပေါ်တွင် လွန်စွာ အင်အား ကောင်း နေကြောင်း မြင်တွေ. နေရတော့သည်။ ထို အချက်ကို ထပ်မံ၍ အင်အား ဖြည့်နေသော အချက်မှာ- ၄-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော စနေသည် ရပ်ဝေး မြေခြား နိုင်ငံခြားနှင့် ဆိုင်သော ၁၂-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည်လျှက်-ဇာတာရှင်၏ ၉-တန်.ဘာဝ၊ (တနင်္လာ၏ မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ကို ၁၀-တန်. အမြင် ဖြင့် ၇၆% လွှမ်းမိုးထားခြင်းဖြစ်သည်၊ (အထူးမှတ်ချက်- ဘာဝ ချက်နှင့် အံသာ အကွာအဝေးတို.ကို ကြည့်မှသာ ဤအချက်ကို မြင်ရပါမည်။ သတိပြု လေ့လာပါ။) ဤအချက်သည် ဇာတာရှင် အား နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နေထိုင်ခဲ့စေရခြင်း၊ အဆင့်မြင့် ပညာကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှ သင်ကြားခွင့် ရခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
သို.သော်လည်း တနင်္လာဂြိုဟ်အား ဒုဌာနဘာဝ ဖြစ်သော ၁၂-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော သောကြာသည် သမသတ် အမြင်ဖြင့် အတိအကျ နီးပါး မြင်နေခြင်းကို တွေ.ရမည်။ (တနင်္လာသည် ဗြိစ္ဆာရာသီ ၂၃ အံသာ၊ ၁၂ မိနစ်တွင် တည်နေ၍၊ သောကြာသည် ပြိဿရာသီ ၂၂ အံသာ၊ ၄၇ မိနစ်တွင် တည်နေသည်။ သမားရိုးကျ တြိစက္ကဇာတာများတွင်-အံသာ တန်ဘိုးကို ဖေါ်ပြလေ့ မရှိသဖြင့်- ထိုကဲ့သို. လွန်စွာ အရေးကြီးလှသော အတိအကျ လွှမ်းမိုးတို. ထင်ရှားစွာ မသိနိုင်ပါ။) သောကြာ သည် မော်တော်ယာဉ် ကို ရည်ညွှန်းသည့်- ၁၂-တန်.သည် ဆုံးရှုံး ပျက်စီးရမှုကိုဖေါ်ဆောင် နေပြီး-စန်းခေါ် တနင်္လာအား အဆိုးအား- အင်ကုန်အားကုန် လွှမ်းမိုးထားသဖြင့် မော်တော်ယာဉ် နှင့် ပါတ်သက်ပြီး-ဇာတာရှင်အတွက် အန္တရာယ် ရှိသည် ကို ပြဆိုနေပါသည်။ ဇာတာရှင် သည် မော်တော်ယာဉ် ဖြင့် ခရီးသွားနေစဉ် ၂-ကြိမ် အလုပ်ကြံ ခံရပြီး၊ နောက်ဆုံးအကြိမ်တွင် အသက် ဆုံးခဲ့ရသည်ကို သတိပြုပါ။ ဇာတာ တစ်စောင်တွင် ၄င်း၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် သဘောကို မလေ့လာပဲ၊ သောကြာဆိုလျှင် သောမဂြိုဟ် ဟုသော လှေနံ ဓါးထစ် မှတ်သား မှုများသည် ဟောချက်တစ်ခု အတွက် အမှားကြီး မှားနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်တို. သတိပြုရန် လိုပါသည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ် အား MOTAA နည်းဖြင့် အသေးစိတ်ဖြင့် လေ့လာခြင်း။
ပင်ကိုယ် သဘာဝ အားဖြင့် အင်္ဂါသည် ၈-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည် သူများအနေဖြင့် ဘာလုပ်လုပ် စိတ်လို လက်ရ လုပ်မိတတ်သည်။ ငွေကြေး သုံးစွဲရာတွင်လည်း သိပ် ဂရုစိုက်တတ်သူမျိုး မဟုတ်တ်။ ဈေးဝယ် သော အခါ ဈေးမဆစ်တတ်သော သူမျိုးဖြစ်သည်။ ၆-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် သည် ၈-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင် အနေဖြင့် လူများများ ဆက်ဆံလေ- ရန်သူပိုများလေ ဖြစ်လာတတ်သည်။ အကြွေး ပြဿနာများ ရှိတတ် သည်။ (ဇာတာရှင်နှင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို.အား- ငွေကြေး ကိစ္စ၊ အကျင့်ပျက်မှုများနှင် စွပ်စွဲချက်များ ရှိသည်ကို သတိပြုပါ။) မတော် တစ်ဆမှုများ၊ ရန်သူ၏ တိုက်ခိုက် မှုများကို သတိထား ရမည့် ဇာတာမျိုးဖြစ်သည်။ အချို.သော ရှေးကျမ်းများတွင်- ၄င်းကို ရာဇ ယုဂ် တစ်ခု အနေ (၀ိပရိတ ရာဇယောဂ) ဟူ၍ ပင် ဖေါ်ပြထားသည်။ ဤသည်ကို အကြောင်းပြု၍ အချို.သော မြန်မာ ဗေဒင် ပညာရှင် အချို.က- ဒုဌာန ဂြိုဟ်ဆိုလျှင်- ဒုဌာန မှာ နေလျှင် ကောင်းသည်။ “လူဆိုး သည် လူဆိုးနေရာ၊ လူကောင်းသည် လူကောင်း နေရာတွင် နေလျှင် ကောင်းသည်။” ဟု ဆိုကြသည်။ အိန္ဒိယ နှင့် အချို.သော အနောက်တိုင်း ပညာရှင် အချိုတို.ကလည်း “အနှုတ်- အနှုတ် ၂-ခါ ဆိုလျှင်၊ အပေါင်း ဖြစ်သည်။” ဟုပင် ဆိုကြ ပါသေးသည်။
ဤအဆို တို.သည် မမှန်ပါ။ မှားသည် ဟုလည်း- မဆိုလိုပါ။ မူလ ကျမ်းတို.၏ ဆိုလိုယင်းကို သဘော မပေါက်ပဲ- ကျမ်းတွင် ဖေါ်ပြ ထားသည် ဆိုသော အချက်ဖြင့် ပုံသေ စွဲကိုင်ခြင်းဖြင့်- မှားယွင်း သော အဖြေ ထွက်လာမည်သာမက- မူလ ရှေးကျမ်းများကိုပင် နောင်လာ နောက်သား များ အထင်သေး သွားနိုင် သဖြင့်- စာရေးသူ အနေဖြင့် ရှင်းလင်း ဖေါ်ပြပေးရန် လိုအပ်သည်ဟု ထင်မိပါသည်။ ဤနေရာတွင်- ကျမ်းကိုး ကျမ်းကား ရှိမှ ယုံကြည်မည် ဆိုသူများ အတွက်- အောက်ပါ ကျမ်း (၂) စောင်မှ ကောက်နှုတ်ချက်ကို ဖေါ်ပြလိုပါသည်။
ဖလဒီပက ကျမ်း- ၆/၆၃ အရ- ဆိုလျှင် ၆-တန်.သခင်သည် ၆-တန်.၊ ၈-တန်.၊ ၁၂-တန်.တို.တွင် ရပ်တည်ပါက ၀ိပရိတ ဟဿ ရာဇယောဂ ရရှိသည်။ ဤယောဂ (ယုဂ်) ကို ရထားခြင်းဖြင့် - ဇာတာရှင် သည် ပျော်ရွှင်မှု၊ ချမ်းသာမှု၊ အမည် နာမကျော်ကြားမှုကို ရမည်။ ရန်သူအား အနိုင်ရ အောင်မြင် မည်ဟု ဆိုထားသည်။
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်း ၅/၂/၂- တွင် ၆-တန်.သခင်သည် ပါပ ဂြိုဟ်ဖြစ်လျှက် (ရှေးကျမ်း များက- အင်္ဂါကို ပါပ အဖြစ် အမြဲယူဆသည်။) ၁-တန်.ဘာဝ (လဂ်)၊ ၈-တန်.နှင့် ၁၀-တန်.တို.တွင် တည်ပါက အရိဌ ၀ါရဏ ယောဂ ကို ရသည် ဟုဆိုထားသည်။ ထိုယောဂ ကို ရခြင်းဖြင့် - ဇာတာရှင်တွင်- အပူကျိတ်၊ အပူနာ၊ အကျိတ်လုံး၊ ကင်ဆာ ကဲ့သို.သော ရောဂါများ ဖြစ်ပေါ် စွဲကပ် တတ်သည် ဟု ဆိုထားသည်။
အထက်ပါကျမ်း- ၂-စောင်နှင့် ယှဉ်လိုက်လျှင်- ယခုကိစ္စတွင် ဇာတာရှင် သည် အထက်ကျမ်း ၂-စောင် စလုံးမှ -ယောဂ (ယုဂ်) ၂-မျိုး စလုံးကို ရထား၏။ ဘာကို ကောင်းသည်ဟု ဆိုပါသနည်း။ ကျမ်း ၂-စောင် စလုံး မမှားပါ။ ထိုနည်းတူ- ထိုကျမ်းတို.ကို မှီငြမ်းပြီး ဟော၍လည်း အဖြေမှန် မထွက်ပါ။ ထိုကျမ်းတို.၏ နောက်ကွယ်မှု ဆိုလိုရင်း- ဂြိုဟ်နှင့် ဘာဝတို.၏ ပရိယာယ်ကို သိပြီးမှသာ- တကယ့် အဖြေမှန်ကို ဖေါ်ထုတ် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အမှန် အားဖြင့် ၆-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် သည် ၈-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ၆-တန်.ဘာဝ သည် မိမိကိုယ်ပိုင် မဟုတ်သော မကောင်းသော ဌာနတွင် တည်မိခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ နေရောင်သင့် (အတ္ထမိ) ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း အင်အား ပျက်သွား၏။ ထိုနည်းတူ- ၈-တန်.ဘာဝ အနေဖြင့် လည်း မိမိ အိမ်တွင် မကောင်းသော ဒုဌာန အိမ်ရှင် လာနေခြင်း ခံလိုက်ရသဖြင့်- အင်အားပျက် သွားပြန်၏။ ဤနေရာတွင်- ဗေဒင် ဆရာ အချို ၏ အယူအဆ တစ်ခုကို ရှင်းလင်းရန် ထပ်လိုလာပြန်ပါသည်။ သူတို.အနေဖြင့် -၆-တန်.၊ ၈-တန်. အားနည်း သွားတာ၊ ကောင်းသည် ဟု ဆိုကြသည်။ ဤအဆိုသည် လုံးဝ မမှန်ကန်ပါ။ ၆-တန်.ဘာဝ အင်အား ကောင်းမှ-ရန်သူကို ရင်ဆိုင် အောင်မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ ၈-တန်.ဘာဝ အင်အား ကောင်းမှ အသက်ရှည်မည် ဖြစ်သည်။ ယခု လက်တွေ. နမူနာ ပြသနေသော အချက်က- ဇာတာရှင် အား ရန်သူက အသေခံ လုပ်ကြံသွားသည်။
ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ် အား MOTAA နည်းဖြင့် အသေးစိတ်ဖြင့် လေ့လာခြင်း။
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် -၉-တန်.တွင် ရပ်တည်ခြင်းဖြင့် နက်နဲသော ဒဿနိက အတွေးအခေါ် သဘော တရားတို.ကို နားလည်နိုင်သော သူမျိုးဖြစ်သည်။ အသိဥာဏ်နှင့် ပါတ်သက်သော လေ့လာမှုများကို အဆက်မပြတ် လိုက်စားမည့် လူမျိုး ဖြစ်သည်။ မည်သည့် ပညာကို မဆို အသေးစိတ် ဆန်းစစ် လေ့လာမည့် လူမျိုးဖြစ်ပြီး၊ ခရီးသွား ရခြင်းများ ရှိလိမ့်မည်။
တနည်းအား ဖြင့်လည်း လာဘ ဘာဝ ဖြစ်သော ၁၁-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓဟူး သည် ၉-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင် သည် ငွေရှာရာတွင် ကံကောင်း သူဖြစ်သည်။ ကောင်းမြတ်သော ချမ်းသာ ခြင်းကို ပေးသည် ဓနယုဂ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်သည် လူနေမှု အဆင့်အတန်း၊ ငွေကြေး အနေအထားအရ တစ်သက်သာ လုံး အဆင့်မြင့်မြင့် နေထိုင်ခဲ့ရသည်။
ကြာသပတေး ဂြိုဟ် အား MOTAA နည်းဖြင့် အသေးစိတ်ဖြင့် လေ့လာခြင်း။
ကြာသပတေးဂြိုဟ် -၈-တန်.တွင် ရပ်တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် အပြစ်တို.ကို ကျူးလွန်တတ် သော အနေ အထား တစ်ခု လည်း ဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်လည်း ၂-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော ကြာသပတေး သည် ၈-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် စိတ်ခံစား လွယ်တတ်သည်။ တစ်ခါ တစ်ရံ မလိုအပ်ပါပဲလျှက် အစိုးရိမ် ကြီးနေတတ်သည်။ ဥစ္စာပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးရတတ်သည်။ အိမ်တွင်းရေး စိတ်ချမ်းသာ မှု ရရန် ခက်ခဲသည်။ သို.သော်လည်း ကြာပတေး၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ဖြစ်သော ၂-တန်.ဘာဝ၏ အလယ် ဗဟိုချက်ကို ၄-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော စနေ မှ ၃-တန်. အမြင်ဖြင့် ၇၆% အင်အားဖြင့် လွှမ်းမိုး ထားသည်။ ထိုနည်းအားဖြင့် ၂-တန်.နှင့် ၄-တန်. တို. ဆက်စပ်နေခြင်းကြောင့် ငွေကြေး ပိုင်ဆိုင်မှု တို. ပြည့်စုံကာ၊ ပညာဥာဏ် ကောင်းသူ အဖြစ်ကို ရရှိထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သာမာန် အားဖြင့် အမှတ်တမဲ့ အားဖြင့် ကြာသတေး ဂြိုဟ် ဒုဌာန တွင် ရပ်တည်၍ ပညာရေး မကောင်းဟု ဆိုကြမည် ဆိုလျှင်- ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆင့်အမြင့် ဆုံး တက္ကသိုလ် များဖြစ်သည့် အမေရိကန် နိုင်ငံမှ ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်၊ အင်္ဂလန် နိုင်ငံ အောက်စ်ဖို.ဒ် တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းဆင်း လာသူ တစ်ဦး အတွက် အကြီးအကျယ် မှားယွင်း သွားမည် ဖြစ်သည့် အတွက်- ပညာရှင်များ ဆင်ခြင်ရန် လိုပါသည်။
သောကြာ ဂြိုဟ် အား MOTAA နည်းဖြင့် အသေးစိတ်ဖြင့် လေ့လာခြင်း။
သောကြာဂြိုဟ် ၇-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည်ခြင်း ဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ရောက်ရာ နေရာတွင် ချစ်ခင်သူ ပေါများသော အနေအထားကို ရနေသည်။ သို.သော်လည်း ၁၂-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော သောကြာဂြိုဟ်အနေဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ၇-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးတွင် အခက်အခဲများ ပေါ်ပေါက်တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် အတူမနေရပဲ ခွဲခြား နေရခြင်း သော်လည်းကောင်း၊ အိမ်ထောင် ကွဲတတ်သည်ကို လည်းကောင်း ပြဆိုနေသော အနေအထားဖြစ်သည်။ အသုံးအစွဲနှင့် ပါတ်သက်၍ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ.ရတတ်သော ဇာတာမျိုး ဖြစ်နေ ပါသည်။ ဤအချက်ကို ထောက်ခံနေသော အချက်က- ဇာတာရှင်၏ အိမ်ထောင်ဘက်သည် မိန်းမ ရှုပ်ပွေသူဟု နာမည်ရသူ ဖြစ်နေခြင်း၊ ဇာတာရှင် ကိုယ်တိုင် အိမ်ထောင်ရေးတွင် စိတ်ဆင်းရဲ ခဲ့ရ သော်လည်း- ဘ၀ အနေအထားအရ မိမိ၏ ခံစားချက်ကို လျှို.၀ှက် သိုသိပ် ထားခဲ့ ရခြင်းက သက်သေ ခံနေပါသည်။ ဇာတာရှင်အား အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှု ဖြင့် စွပ်စဲကြ ရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ- ၄င်း၏ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူကြောင့် ဖြစ်သည်။ အထက်တွင် ဖေါ်ပြထားခဲ့သည့် အတိုင်း ၁၂-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော သောကြာဂြိုဟ် သည် ဇာတာရှင်၏ စိတ်ကို အစိုးရသော တနင်္လာအား ၁၀၀% အင်အား အပြည့် ဖြင့် သမသတ် အမြင် ပြုထားသည်ကလည်း - ဇာတာရှင် အနေဖြင့် မည်မျှ စိတ်ဆင်းရဲ ခဲ့ရသည်ကို သိနိုင်သော အနေအထား တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
စနေ ဂြိုဟ် အား MOTAA နည်းဖြင့် အသေးစိတ်ဖြင့် လေ့လာခြင်း။
စနေဂြိုဟ်သည် ၁၂-တန်.ဘာဝတွင် တည်နေခြင်း ဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ပျော်ရွှင်မှုများ ကင်းမဲ့တတ်သည်။ တစ်ဖန်- အသက်ရှည်မှု၏ ကာရက ဂြိုဟ် ဖြစ်သော စနေသည် ဒုဌာန ဘာဝတွင် တည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှည်ရန် ခက်ခဲ ခြင်းကို ဖြစ်စေပြန်သည်။ ထိုအချက်ကို ထောက်ပံ့နေ သောအချက်မှာ - ကံဆိုး ခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်နှင့် အံသာခြင်း (မှတ်ချက်- ပုံမှန် မြန်မာ ဇာတာတွက် ချက်မှု များတွင် နက်ပကျွန်း၊ ယူရေးနပ်စ်၊ ပလူတို တို.အား လုံးဝ မတွက်ချက်ပါ။ ) အလွန်နီးကပ်စွာ တည်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
တစ်ဖန်- ၄-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော စနေသည် ၁၂-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင် သည် မပျော်ရွှင်သော ဘ၀တစ်ခုကို လျှောက်လှမ်း နေရတတ်သည်။ အိုးအိမ်၊ မြေယာ၊ ယာဉ်ရထား တို. ဆုံးရှုံးတတ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်လည်း- ဇာတာရှင်သည် မိမိ၏ ဇာတိမြေတွင် ဆုံးရှုံးမှုများကို တစ်ခုပြီး၊ တစ်ခု ရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နေထိုင်ခဲ့ရခြင်း၊ အချုပ်အနှောင် ခံခဲ့ရခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေသော အချက်မှာလည်း- ဤအကြောင်း ကြောင့် ပင်ဖြစ်သည်။
မစ္စက်ဘူတို၏ဖခင် ဖြစ်သူအား သေဒဏ် စီရင်ခြင်း ခံခဲ့ရစဉ်က။
ပထမဦးစွာ- ဒဿာကာလကို ကြည့်လိုက်ပါက-
စနေ ထူလ ဒဿာ၊ ရာဟု- အန္တရ ဒဿာ၊ ရာဟု- ပြတန္တရ ဒဿာ၊ ဖြစ်နေပါသည်။ နက္ခတ်ပညာ လေ့လာ ထားသူများ အနေဖြင့် အထက်တွင် ရှင်းလင်း ထားခဲ့သော အချက်နှင့် ယှဉ်တွဲ ၍ ထိုဒဿာ အဟောကို အလွယ်သိနိုင်နေသဖြင့် အသေးစိတ် တွေ.ရှိချက်များကို ရေးစရာပင် မလိုတော့ပါ။
ယခုအောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ ဇာတာရှင် မူလ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ သောကြာ ဂြိုဟ်တို.အား ကောဇာ ဂြိုဟ်ဆိုးများ စုပေါင်း လွှမ်းမှုထား ပုံကို အောက်တွင် ဂရပ်ဖ် ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
မစ္စက်ဘူတိုလုပ်ကြံခံရသဖြင့် အသက်ဆုံးချိန်တွင် ဂြိုဟ်တို.၏ အနေအထား။
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ရာဝါပင်ဒီ မြို.တွင်- ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆွယ် စည်းရုံးချိန် ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇-ရက်တွင် မစ္စက်ဘူတိုအား လုပ်ကြံ ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ရာဝါပင်ဒီ အထွေထွေ ရောဂါကု ဆေးရုံတွင် ဒေသ စံတော်ချိန် ညနေ ၆း၁၆ မိနစ်တွင် သေဆုံးကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ဗုံးကွဲစဉ်က အနည်း ဆုံး လူ ၂၃-ဦး ခန်.ပါ သေဆုံးခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂-လ ခန်.က လုပ်ကြံမှုတွင် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက် ခဲ့သော်လည်း-ယခု အခါတွင် မူတော့ လုပ်ကြံသူများက အထမြောက် အောင်မြင်သွားခဲ့သည်။
ပထမဦးစွာ- ဒဿာကာလကို ကြည့်လိုက်ပါက-ကိတ် ထူလ၊ ဗုဒ္ဓဟူး အန္တရ၊ တနင်္ဂနွေ ပြတန္တရ ဒဿာတွင် ရောက်ရှိနေသည်။
ကိတ်ဒဿာ သည် ဇာတာနှင့် ပါတ်သက်၍ သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ- “ဇာတာရှင်၏ မိသားစုဝင် ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ရှင်ဘုရင် (အုပ်စိုးသူ အစိုးရ) နှင့် ပါတ်သက်၍ အထင်အမြင် လွဲမှားခြင်း၊ ပညာသင်ယူ သူ ဖြစ်ပါက ပညာရေး ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဆွေမျိုး ညာတိ၊ ချမ်းသာမှု နှင့် မိတ်ဆွေ တို. ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ရောဂါ ကျရောက်တတ်ခြင်း၊ ယာဉ်ရထား ပေါ်မှ ပြုတ်ကျတတ်ခြင်း၊ အဆိပ်ခတ် ခံရခြင်း၊ လက်နက်သင့် ခံရခြင်း၊ ဝေးကွာသော အရပ်ဒေသများသို. ရောက်ရှိရတတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ကာယ ကျန်းမာရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ ဒုက္ခများတတ်ခြင်း၊ -------” စသည် ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဇာတာရှင် သေဆုံးချိန်တွင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် (တနည်းအားဖြင့် ဆိုသော်- ဇာတာရှင်၏ ဘ၀အောင်မြင်မှု-ကို တာဝန် ယူထားသော ၁၀-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်လည်း ဖြစ်လျှက်-မူလဇာတာတွင် မရဏဘာဝ အမည်ရှိသည့် သေဆုံးခြင်းကို သဘောဆောင်သည့် ၈-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည် နေသည့် ဂြိုဟ်) အား၊ ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ရာဟုဂြိုဟ်မှ ၇၈% ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သွေးသံရဲရဲ ကိုသရုပ်ဖော် သည့် အင်္ဂါ (တစ်နည်းအားဖြင့်လည်း ဇာတာရှင်၏ ရန်သူကို အဓိပ္ပါယ် ဖော်ဆောင်နေသည့် ၆-တန်.ဘာဝ အိမ်ရှင်လည်း ဖြစ်နေသော) မှ ၉၈% ဖြင့် လွှမ်းမိုး တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းသည် ဇာတာရှင် အနေဖြင့် ရန်သူ၏ ရက်ရက် စက်စက် လုပ်ကြံမှုကြောင့် ဤကာလတွင် အောင်မြင်မှု ပျက်စီးကာ- သေဆုံးသည် အထိ အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်သည်ကို ပြဆိုနေသည်။
နောက်ထပ်၍ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါက -တနင်္ဂနွေ ပိုင်ဆိုင်သော ၁၀-တန်.ဘာဝ၏ ဗဟိုချက်မှတ် နေရာ အားလည်း ကောဇာ ရာဟုနှင့် ကိတ်တို.မှ စုပေါင်း လွှမ်းမိုး ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြန်ရာ- တနင်္ဂနွေ အနေဖြင့် ရစရာ မရှိတော့ပေ။
မစ္စက်ဘူတို၏ ဇာတာသည်- လူသား တစ်ယောက်တွင် ကြုံတွေ.ရတတ်သော- လောကဓံ တရားတို.၏ ရိုက်ခတ်ခြင်းကို ရှင်းလင်းစွာ ပြဆိုနေသည်။ ဖခင် ၀န်ကြီးချုပ်ဘ၀ တွင် အေးချမ်းစွာ၊ ပညာသင်ကြား ပြီး ကြီးပြင်း လာခဲ့ပြီး နောက်တွင် တော့- မိသားစု တစ်ခုလုံး ရက်ရက် စက်စက် နှလုံးကွဲ အောင် ခံစားခဲ့ ရသည့် အခြေအနေ၊ အိမ်ထောင်ဘက် နှင့် ပါတ်သက်၍ အရှက်မကွဲရအောင် သိုသို သိပ်သိပ်၊ ဖုံးဖုံး ဖိဖိ နေထိုင် ခဲ့ရသည့် ဇနီး မယား တစ်ယောက်၏ ခံစားမှု၊ ပြည်သူ ချစ်သော လူထု ခေါင်းဆောင်၊ တစ်ပြိုင်တည်း ပင် အတိုက်အခံ တို.၏ စွပ်စွဲခြင်းကို ဆက်တိုက် ခံစားနေရသည့် ဘ၀၊ နောက်ဆုံး တွင်တော့ မိမိ၏ အသက်ဇီဝိန်ကို ပင် ရက်ရက် စက်စက် လုပ်ကြံခံလိုက်ရသည့် ဘ၀ တို.ကို ပြဆိုနေသဖြင့် ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အထက်တန်းစား၊ အလယ်တန်းစား၊ စသည့် မည်သည့် လူမျိုးတို.တွင် မဆို- ကြုံတွေ.တတ်သည့် လောကဓံ တရားကို နားလည် အောင် ပြဆိုနေ သော ဇာတာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။